Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Momba ny Hongria » Seranam-piaramanidina Budapest: efa eo ny Runway Runway fahasivy!
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Hongria • Vaovao • tompon'andraikitra • Sports • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny seranam-piaramanidina Budapest koa dia hanao fifaninanana hahafahan'ny mpihazakazaka 100 tsara vintana handray anjara amin'ny hazakazaka amin'ny alàlan'ny fisarihana loka izay hambara amin'ny tambajotra sosialy seranam-piaramanidina amin'ny fotoana manaraka.
Amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny fepetra momba ny hazakazaka, sy ny fanarahana ny fitsipika momba ny fiarovana sy ny fiarovana, ny seranam-piaramanidina dia handray ny hazakazaka tokana.
Hetsika fanatanjahan-tena ho an'ny indostrian'ny fitaterana an-habakabaka amin'ity taona ity dia hatao ny asabotsy 18 septambra 2021 ao amin'ny lalamby seranam-piaramanidina Budapest 13R-31L.
Ny vola azo amin'ny fihazakazahana amin'ity taona ity dia zaraina eo amin'ny vondrona sembana Hongroà SUHANJ! Foundation sy fikambanana iraisam-pirenena momba ny homamiadana momba ny homamiadana, Anthony Nolan.
Taorian'ny fankatoavana an'i Anthony Nolan's Organizational Fundraiser of the Year, Seranam-piaramanidina Budapest ary anna.aero dia nanamafy ny hetsika fanatanjahantena ho an'ny indostrian'ny fitaterana an-habakabaka amin'ity taona ity dia hatao ny asabotsy 18 septambra 2021 ao amin'ny lalamby seranam-piaramanidina 13R-31L any Budapest Airport.
Nahazo vola mitentina € 220,000 ho an'ny fiantrana hatramin'ny 2013, ny vola azo amin'ny hazakazaka amin'ity taona ity dia zaraina eo amin'ny vondrona sembana Hongroà SUHANJ! Foundation sy fikambanana iraisam-pirenena momba ny homamiadana momba ny homamiadana, Anthony Nolan. Miaraka amin'ny saram-pidirana rehetra natolotra ho an'ireo fikambanana mpanao asa soa voafidy, ireo mpihazakazaka avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, seranam-piaramanidina ary orinasa manerana ny vondrom-piaramanidina dia asaina hanatevin-daharana ireo ekipa avy amin'ny orinasa malaza sy atleta marobe avy amin'ny SUHANJ! Fototra, amin'ny hazakazaka izay ahitana halaviran-dàlana roa - 10km (halavan'ny hazakazaka efatra) sy 5km.
Chris Dinsdale, CEO, Seranam-piaramanidina Budapest naneho hevitra: “Ankoatry ny fiaraha-mihazakazaka amin'ny tontolo tsy manam-paharoa, amin'ny làlambe misy ny seranam-piaramanidina, ny mpandray anjara dia hanohana antony tsara maro ihany koa. Izahay ao amin'ny seranam-piaramanidina Budapest dia mino fa zava-dehibe ny andraikitra ara-tsosialy, noho izany dia fahafinaretana lehibe ho anay ny manambatra hery ho an'ireo tanjona nasehon'ny SUHANJ! Foundation sy Anthony Nolan, tamin'ny taona fahasivy nisesy. ”
Na eo aza ny zava-tsarotra ateraky ny areti-mandringana ho an'ny rehetra amin'ny vondrom-piarahamonin'ny fiaramanidina sy ny fiarahamonina manerantany, ny laharam-pahamehan'ny seranam-piaramanidina Budapest dia ny fanohanana hatrany ny antony ambony, indrindra mandritra ny fotoam-pitsapana. Amin'ny alàlan'ny fanovana ny toe-piainan'ny hazakazaka, sy ny fanarahana ireo fitsipika momba ny fiarovana sy fiarovana, ny seranam-piaramanidina dia handray indray ny fihazakazahana tokana ho hany lehibe sy mifamatotra tanteraka, seranam-piaramanidina eropeana afaka manolo-tena hanidy ny làlambe amin'ny antoandro amin'ny asabotsy.
“Manoloana ny tolona goavambe ho an'ny rehetra dia nitandrina an'io fomban-drazana lehibe io ny seranam-piaramanidina Budapest tamin'ny taon-dasa ary nanangona efa ho 20,000 600 € noho ny fandraisana anjaran'ireo mpihazakazaka efa ho XNUMX. Hitanay fa andraikitra lehibe manohy ny fanangonam-bola izahay ary manantena ny handray ireo mpanohana tsy mivadika rehetra, ary koa ireo mpihazakazaka vaovao, amin'ny fanatanterahana isan-taona amin'ity taona ity, "hoy i Dinsdale nanampy.
Seranam-piaramanidina Budapest koa hanao fifaninanana hahafahan'ny mpihazakazaka 100 tsara vintana handray anjara amin'ny hazakazaka amin'ny alàlan'ny fisarihana loka izay hambara amin'ny tambajotra sosialy seranam-piaramanidina amin'ny fotoana manaraka.